ရတနာ သုံးပါး ၏အဓိပ္ပါယ်၊ ဗုဒ္ဓ၀င် ၊ နှိုးဆော်အကြံပေးချက်၊ နေ့ထူးနေ့မြတ် ၊ လူတို့၏ ကျင့်ဝတ်များ၊ ဗဟုသုတ ၊ နည်းပညာနှင့် solfware ၊ ကဗျာ နှင့် ဗေဒင်
မြတ်စွာဘုရားက တာဝတိံသာ နတ်ပြည်မှာ နိမ္မိတ ရုပ်ပွားတော် ကိုယ်စား ထားခဲ့ပြီး အဘိ ဓမ္မာ တရားတော် အကျယ်ကို ၀ါတွင်း သုံးလ ပတ် လုံး ဟောကြားတော် မူပြီး တရားစစ်သူကြီး ရှင် သာရိပုတ္တရာ ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကို အဘိဓမ္မာ တရားတော် အကျဉ်းချုပ်ကို တချိန် တည်းမှာ ဟောကြား သင်ပြ တော် မူပြီး သီတင်းကျွတ် လပြည့်နေ့မှာ လူ့ပြည်ကို ပြန်ဆင်း ခဲ့တဲ့ အထိမ်း အမှတ် အနေနဲ့ နက်ဖြန် မနက်မှာ ကျရောက် မယ့် သီတင်းကျွတ် လပြည့်နေ့ကို အဘိဓမ္မာ အခါတော်နေ့ အဖြစ် သတ်မှတ် ခေါ်ဝေါ် ခဲ့ကြပါသည်။
Posted by aung myin at 7:50 PM
Labels: နေ့ထူး နေ့မြတ်
ဗောဓိသတ္တ = ဘုရားဖြစ်မည့် ပုဂ္ဂိုလ်။
ဗောဓိသတ္တ = ဗောဓိသတ်၊ ဘုရားအလောင်း၊ ဘုရားဖြစ်မည့် ပုဂ္ဂိုလ်။
ဘုရားလောင်း (၃)မျိုး ရှိသည်။
(၁) ပညာဓိကဗောဓိသတ္တ = ပညာလွန်ကဲ၍၄-သင်္ချေ နှင့်ကမ္ဘာတစ်သိန်းမျှ
ပါရမီ ဖြည့်ရသော ဘုရားအလောင်း။
(၂) သဒ္ဓါဓိကဗောဓိသတ္တ = သဒ္ဓါလွန်ကဲ၍ ၈-သင်္ချေ နှင့် ကမ္ဘာတစ်သိန်းမျှ
(၃) ၀ီရိယာဓိကဗောဓိသတ္တ = ၀ီရိယလွန်ကဲ၍ ၁၆-သင်္ချေ နှင့် ကမ္ဘာတစ်သိန်းမျှ
one destined to brcomeaBuddha.
1. The Bodhisatta, who for four asankheyyas and one hundred thousand aeons, fulfils the practice of Perfection, parami, with Wisdom predominating, pannadhikabodhisatta;
2. The Bodhisatta, who for eight asankheyyas and one hundred thousand aeons, fulfils the practice of Perfection, parami, with Convition, saddha predominating,
3. The Bodhisatta, who for sixteen asankheyyas and one hundred thousand aeons, fulfils the practice of Perfection, parami, with Endeaviou predominating, viriyadhikabodhisatta.
Posted by aung myin at 10:59 PM
ဂန္တ= တုပ်နှောင်ခြင်း
ဂန္တ= တုပ်နှောင်ခြင်း၊ တုပ်နှောင်တတ်သောတရား။
(၁) အဘိဇ္စျောကာယဂန္တ= သူတစ်ပါး စည်းစိမ်ကို မတရားလိုချင်မှု လောဘ။
(၂) ဗျာပါဒကာယဂန္တ= သူတစ်ပါးကို ပျက်စီးစေလိုမှု ဒေါသ။
(၃) သီလဗ္ဗတပရာမာသ ကာယဂန္တ= အကျင့်သီလ၌ အယူမှားမှု ဒိဌိ။
(၄) ဣဒံသစ္စာဘိနိဝေသ ကာယဂန္တ= ဤအယူသည်သာမှန်၏-ဟု စွဲမြဲစွာယူခြင်း ဒိဌိ။
There are four bonds:
1. Bond of covetousness, i.e.,desiring to possess other's property wrongfully,
2. Bond of ill will; i.e.,wishing to destroy other's , byapadakayagantha;
3. Bond of wrong view regarding practiceof morality, silabbata paramasa-kayagantha;
4. Bond of wrong view that firmly holds' only this is true, idamsaccabhinivesakayagantha.
Posted by aung myin at 10:37 PM
ပအိုဝ်း တိုင်းရင်းသားတို့သည် မိမိကိုယ်ကို နဂါးအမျိုးအနွယ်မှ ပေါက်ဖွားလာသည်ဟု ယူဆကြ၏။ မိခင်မှာ နဂါးမ ဖြစ်ပြီး ဖခင်မှာ ဇော်ဂျီ ဟုယူဆကြသည်။ သက်ကြီးရွယ်အိုများကလည်း မိမိတို့မှာ နဂါးမျိုးနွယ်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် နဂါးမှ ပေါက်ဖွားဆင်းသက်လာပုံကို လူငယ်များအား ယနေ့တိုင် ပြောဆိုနေကြသေး၏။
သက်ကရာဇ် ၄၀၀ ခန့်လောက်တွင် တိုင်းပြည်တစ်ပြည်မှ မင်းနှင့်မိဖုရားတွင် သားတော်နှစ်ပါးထွန်းကား၏။ သားတော်နှစ်ပါးစလုံးမှာ သူတော်ကောင်း စိတ်ဓါတ်များရှိကြသည်။ ထို့ကြောင့် အရွယ်ရောက်လာသောအခါ ခမည်းတော် မယ်တော်ထံ ခွင့်တောင်းပြီး ရသေ့ဝတ်လဲကာ တောထွက်သွားကြ၏။
တစ်နေ့သောအခါ နဂါးမသည် လူ့ပြည်သို့ ရောက်ရှိခဲ့ရာ လူယောင်ဖန်ဆင်းပြီး တောထဲတွင် လှည့်လည်နေထိုင်ရင်း ဟေမ၀န်၏ စိမ်းစိုသာယာမှုကြောင့် ထိုတောထဲတွင် နေထိုင်လိုသော စိတ်ဖြစ်ပေါ်လာ၏။ မိန်းမဖန်ဆင်းပြီး တောထဲတွင် လှည့်လည်ခဲ့ရာ နတ်ရေးသောဖူးစာကြောင့် လေလားမသိ ဇော်ဂျီနှင့် ဖူးစာဆုံလေတော့၏။ ဇော်ဂျီသည် ထိုအမျိုးသမီးကို နဂါးမှန်း မသိချေ။ ထို့ကြောင့် နှစ်နှစ်ကာကာ ပေါင်းသင်းနေထိုင်ခဲ့ရာ နဂါးမတွင် ကိုယ်ဝန်ရှိလာခဲ့သည်။
ကိုးလလွယ်ပြီး ဆယ်လသို့ရောက်သောအခါ နဂါးမသည် ဥနှစ်လုံးကို ဖွားသန့်စင်ခဲ့သည်။ ထိုဥနှစ်လုံးသည် အရွယ်အစားတူညီပြီး အလွန်လှပလေသည်။
ထိုသို့ မိမိမိန်းမက ဥနှစ်လုံးဖွားမြင်သည်ကို ဇော်ဂျီက သိရှိသောအခါ “အလို ငါ့ အိမ်သူမသည် လူသားစင်စစ် မဟုတ်၊ မြွေမျိုး နဂါးမျိုးပါကလား” ဟု ညည်းညူလေ၏။ ထို့နောက် စိတ်ပျက်အားငယ်ပြီး ထွက်ပြေးရန် ကြံစည်လေတော့သည်။ ထို့ကြောင့် နဂါးမကို ချိုသာသော စကားပရိယာယ်ဖြင့် ကလေးများအတွက် ဆေးရှာထွက်ခွင့်ပေးရန် ခွင့်တောင်းလေသည်။ မိမိ၏ မိန်းမနဂါးမ မျက်ကွယ်သို့ရောက်သောအခါ ကောင်းကင်သို့ဆန်လျက် ပျံတက်သွားလေသည်။
သုံးလေးရက်ခန့် ကြာသောအခါ နဂါးမသည် မိမိ၏ လင်တော်မောင် ဇော်ဂျီ ပြန်လာလေနိုးဖြင့် လည်တဆန့်ဆန့်နှင့် မျှော်ကိုးနေခဲ့၏။ သို့သော် လင်တော်မောင် ဇော်ဂျီ ပြန်မလာသဖြင့် နဂါးမသည် ယခုကဲ့သို့ ညည်းညူပြန်လေသည်။ “ငါ၏ လင်တော်မောင်သည် ကလေးများအတွက် ဆေးရှာထွက်ရာတွင် ယခုကဲ့သို့ ကြာမြင့်ရခြင်းမှာ ငါသည် နဂါးမဖြစ်ကြောင်းကို ငါ၏ လင်တော်မောင် သိသွားသောကြောင့် ဖြစ်လိမ့်မည်” ဟု ပြင်းစွာ စိုးရိမ်ပူပန်လေ၏။
ထို့ကြောင့် မိမိလင်ကို တွေ့လိမ့်လေနိုး ၊ တွေ့လေနိုးဖြင့် တောအနှံ့ တောင်အနှံ့ လှည့်လည်ရှာဖွေခဲ့၏။ သို့သော် မိမိလင်တော်ကို အရိပ်အယောင်မျှပင် မတွေ့လေသဖြင့် လူမတန် ကံချကာ ပြင်းစွာဟစ်အော် ငိုကြွေးလေရှာသည်။ မိမိ၏ ရင်နှစ်သည်းချာဖြစ်သော ဥနှစ်လုံးကို ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းထဲတွင် လုံခြုံစွာ သိမ်းဆည်းထားခဲ့ပြီး မိမိ၏ဌာန နဂါးပြည်သို့ ပြန်သွားလေ၏။
ထို့နောက် ရသေ့တစ်ပါးသည် ထိုဥကြီးနှစ်လုံးကိုတွေ့ရှိပြီး ကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်ထားသည်။ ထိုဥကြီးနှစ်လုံးမှ ယောက်ျလေးတစ်ယောက်နှင့် မိန်းခလေးတစ်ယောက်ဖွားမြင် လာခဲ့သည်။ ရသေ့ကြီးက ကျွေးမွေးပြုစုခဲ့ရာ ကြီးပြင်လာသောအခါ ထိုအရပ်တွင် မင်းလောင်းတစ်ပါးအဖြစ် အသိအမှတ်ပြု စိုးစံခဲ့သည်။ ယင်မင်းဆက်တို့မှာ ပအိုဝ်းလူမျိူး ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့သည်။ ထိုမှ တစ်ဖန် အထက်ဖော်ပြပါ ရာဇာဝင်ကြောင့် ပအိုဝ်းတို့ ရှမ်းပြည်ရောက်သွားကြသည့်ဟု ဆိုသည်။ ပအိုဝ်းတို့သည် သထုံခရိုင်ကို သထုံကြီးဟုခေါ်ပြီး ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်ရှိ ဆီဆိုင်ကို သထုံကလေး ဟု ခေါ်ကြသည်။ ယင်နေရာ နှစ်ခုတို့တွင် ပအိုဝ်းများစွာ နေထိုင်လျှက်ရှိကြသည်။ ပအိုဝ်းတိုင်းရင်းသား ပေါက်ဖွားဆင်းသက်လာပုံသည် ဒဏ္ဍာရီလား တကယ်လားဟု စဉ်းစားစရာပင် ဖြစ်လေသည်။ ပအိုဝ်းတိုင်းရင်းသား ပေါက်ဖွားလာပုံ ဒဏ္ဍာရီသည် မွန်ရာဇ၀င်နှင့် စေတီတော်များ သမိုင်းစာအုပ်မှ အဆိုနှင့်လည်း ဆင်နေ၏။
Posted by aung myin at 10:13 PM
အပါယ်လေးပါးဆိုတာက ငရဲ၊ တိရိစ္ဆာန်၊ ပြိတ္တာ၊ အသုရကာယ်တို့ဖြစ်ပါတယ်။ အပါယ်ဆိုတာက (အပါယ) ဆိုတဲ့ပါဠိပုဒ်ကနေဆင်း သက်လာတာပါ။ (အပါယ)မှာ (အပ+အယ) ဆိုပြီးနှစ်ပုဒ်ရှိပါတယ်။ အပ= ကင်းခြင်း၊ အယ= ကုသိုလ်တရား၊ သို့မဟုတ် ချမ်းသာ။ နှစ်ပုဒ်ပေါင်းလိုက်တော့ ကုသိုလ်တို့မှကင်းခြင်း၊ ချမ်းသာတို့မှ ကင်းခြင်းလို့အဓိပ္ပါယ်ရပါတယ်။ ဆိုလိုတာက အပါယ်လေးဘုံးသားတို့မှာ ကုသိုလ်တွေမှကင်းခြင်း၊ ကုသိုလ်တရားတို့ကိုပြုလုပ်နိုင်စွမ်းမရှိခြင်း ချမ်းသာခြင်းတရားတို့မှကင်းခြင်း လို့အဓိပ္ပါယ်ရပါတယ်။ မှန်ပါတယ်။ အပါယ်လေးဘုံကိုရောက်သွားပြီဆိုရင် ကုသိုလ်တရားတွေကို ပြုလုပ်နိုင်စွမ်းမရှိသည့်အတွက် ကောင်းသောဘုံဌာနကိုပြန်ရောက်ဖို့ အင်မတန်မှခက်ခဲပါတယ်။ အကုသိုလ်ကံ အဟုန်တွေကုန်ဆုံးမှသာ ကောင်းရာဘုံကိုရောက်စေတာပါ။
အပါယ်လေးဘုံရောက်သွားရင်လည်းကောင်းသောဘုံဌာနသို့ ပြန်ရောက်ဖို့ဟာ မလွယ်သောကြောင့် ထိုအပါယ်လေးဘုံမှ အပြီးပိုင်ကင်းလွတ်အောင် ဒါန သီလ အစထားပြီး ဝိပဿနာတရားများကိုကြိုးစား
အားထုတ်သင့်တယ်ဆိုတာ ပြောပြချင်တာပါ။ ဝိပဿနာအားထုတ်လို့ သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်အဆင့်ရောက်သွားမယ်ဆိုရင် အပြီးပိုင် အပါယ်လေးပါးက ကင်းလွတ်ပါတယ်။ ဒီဘဝမှာ တပည့်တော်တို့ ဝိပဿနာတော့ကြိုးစား အားထုတ်ပါမယ်။ ဒါပေမယ့် သောတာပန်တည်၊ မတည်ဆိုတာတော့
အာမခံလို့မရပါ။ သောတာပန်မတည်ရင်ရော အပါယ်လေးပါးကမလွတ်တော့ဘူးလား။ ဒီဘဝကနေပြီးတော့ အပါယ်လေးပါးလွတ်မြောက်ချင်ရင် ဘယ်လိုကောင်းမှုတွေပြုလုပ်ရမလဲ။ ဘယ်လိုကောင်းမှုတွေပြုလုပ်ရင် အပါယ်လေးပါးလွတ်ကင်းမလဲ-စသည်ဖြင့်ပေါ့လေ၊ မေးဖွယ်ရာရှိပါတယ်။ အဲဒီတော့ နောက်ဘဝ အပါယ်လေးပါးက လွတ်မြောက်ချင်ရင် အပါယ်လေးပါးရောက်ကြောင်း (တနည်း) အပါယ်လေးပါးက လွတ်မြောက်စေနိုင်တဲ့ ကုသိုလ်တွေရှိနေပါတယ်။ အဲဒီကုသိုလ်တွေက ခုနစ်မျိုးရှိပါတယ်။ အဲဒါတွေကဘာတွေလဲလို့ဆိုတော့
(၂) ငါးပါးသီလမြဲခြင်း(ပဉ္စသီလကုသိုလ်)။
(၃) စာရေးတံ မဲချခြင်းကုသိုလ်။
ဗုဒ္ဓဘာသာများ သီတင်းကျွတ်ကာလမှာဆိုရင် ကျောင်းတိုက်များမှ သံဃာများကို မဲချပြီး ကျတဲ့ သံဃာတော်ကို ဆွမ်းစတဲ့ လှူဘွယ်ပစ္စည်းများကို ပေးလှူတဲ့ကုသိုလ်မျိုးပါ။ ကထိန်ရာသီမှာဆိုရင် ပဒေသာပင်များလှူဒါန်းတဲ့ ကုသိုလ်ပါ။ မိမိလှူလိုက်တဲ့ပစ္စည်းဝတ္ထုများကို မဲပေါက်တဲ့ ကျောင်းတိုက်က သံဃာတော်များကို ကပ်လှူခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ မိမိလှူလိုက်ပြီဆိုတည်းက ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမငဲ့ကွက်ပဲ (ဆိုလိုတာက ငါနဲ့ သိတဲ့ဦးဇင်းအတွက် ငါတို့ကိုးကွယ်နေတဲ့ကျောင်းအတွက်) ဆိုပြီး ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမငဲ့ပဲ ကျရာသံဃာတော်တွေ ချမ်းချမ်းသာသာသုံးဆောင်မှီဝဲစေလိုတဲ့အတွက် သံဃာ့ဂုဏ်ကိုရည်မှန်းပြီး လှူဒါန်းတဲ့အလှူမျိုးကို ခေါ်မယ်ဆိုရင်ခေါ်လို့ရပါတယ်။ ဒါကိုစာရေးတံဆွမ်းဝတ်လို့ခေါ်တာပါ။ အလွယ်မှတ်ချင်ရင် စာရေးတံမဲချတဲ့ကုသိုလ်လို့မှတ်လိုက်ပါ။ အဲဒီကုသိုလ်ဟာ အင်မတန်မှပြုရလွယ်ပြီး အကုန်အကျနည်းပေမယ့် ရလိုက်တဲ့အကျိုးတရားကတော့ အပါယ်လေးပါးကတောင် လွတ်မြောက်တယ်ဆိုတော့ အင်မတန်ကိုမှ အကျိုးကျေးဇူးများပါတယ်။ ဒီကုသိုလ်များဟာ တကယ်ဘုန်းရှင်ကံရှင်
များဖြစ်တဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များသာ ပြုလုပ်ခွင့်ရတဲ့ ဒါနမျိုးပါ။ ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ရတာ အင်မတန်ကျေနပ်စရာကောင်းပါတယ်။ (သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေ အပါယ်လေးပါးကလွန်မြောက်သလို ဒီကုသိုလ်လေးရှိထားရင် သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အဆင့်ချင်းတူပါတယ်။)
ရှင်းအောင်ပြောမယ်ဆိုရင် မိမိတို့ကိုးကွယ်နေတဲ့ ကျောင်းတိုက်များကို တစ်လဆွမ်းတစ်ချိုင့်ဖြစ်စေ၊ တစ်လဆွမ်းနှစ်ချိုင့်ဖြစ်စေ လှူတဲ့အလှူကိုခေါ်တာပါ။ လဆန်းပက္ခမှာလှူရင် လဆန်းပက္ခဆွမ်းပေါ့၊ လဆုတ်မှာလှူရင် လဆုတ်ပက္ခဆွမ်းလို့ခေါ်တာပါ။ အဲဒီလို တစ်လကို နှစ်ကြိမ်ဖြစ်စေ၊ တစ်ကြိမ်ဖြစ်စေ လှူတဲ့အလှူဒါနမျိုးကို (ပက္ခိယဘတ္တ) ကုသိုလ်လို့ခေါ်ပါတယ်။ ဒီကုသိုလ်လေးက ငွေကုန်ကျေးကျလည်းနည်းပါတယ်။ ပင်ပန်းမှုလည်းမကြီးလေးပဲ ရလိုက်တဲ့ကုသိုလ်က အပါယ်လေးပါးလွတ်မြောက်တဲ့အထိ အကျိုးကျေးဇူးများပါတယ်။ ဒီကုသိုလ်ကိုလည်း အသက်ထက်ဆုံးပြုလုပ်ပါလို့ တိုက်တွန်းလိုတာပါ။ (သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေ အပါယ်လေးပါးကလွန်မြောက်သလို ဒီကုသိုလ်လေးရှိထားရင် သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အဆင့်ချင်းတူပါတယ်။)
(၅) ဝေဿဝါသိက ကုသိုလ်ပါ။
ဗမာလိုရှင်းရှင်းပြောရင် ဝါဆိုသင်္ကန်းကပ်လှူတဲ့ကုသိုလ်ပါ။ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း ဝါဆို ဝါကပ်တော်မူကြတဲ့ သံဃာတော်အရှင်မြတ်များကို နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း
ဝါဆိုသင်္ကန်း ကပ်လှူမယ်ဆိုရင် (မှတ်ချက် မိမိတတ်နိုင်သလောက်ပေါ့နော် တစ်စုံတတ်နိုင်ရင်တစ်စုံ။ နှစ်စုံတတ်နိုင်ရင်နှစ်စုံပေါ့) အဲဒီကုသိုလ်ဟာလည်း ပြုလုပ်လိုက်တဲ့ကုသိုလ်လေးက သေးပေမယ့်ရလိုက်တဲ့အကျိုးက အပါယ်လေးပါးကတောင် လွတ်မြောက်ခြင်းဆိုတဲ့ အကျိုးမျိုးကိုခံစားရတာပါ။ သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ အလားသဏ္ဍန်တူတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ဟာ အပါယ်လေးပါးကလွတ်မြောက်သလို ဒီကုသိုလ်ကို နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း လုပ်သွားမယ်ဆိုရင် စိတ်သာချပါ။ အပါယ်လေးပါးကလွတ်မြောက်ပါတယ်။
(၆) ဧကောအာဝါသော ဆိုတဲ့ကုသိုလ်ပါ။
ဆိုလိုတာ ကျောင်းတစ်ဆောင်ဖြစ်စေ၊ဇရပ်တစ်ဆောင်ဖြစ်စေလှူဒါန်းတဲ့အလှူဒါနကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ကျောင်းတစ်ဆောင်လုံး တပည့်တော်တို့မတတ်နိုင်ပါဘူး၊ ဘုရားဆိုရင်တော့ တစ်ဆောင်လုံးမတတ်နိုင်ရင် တတ်နိုင်သလောက်လှူပါလို့ပြောချင်ပါတယ်။ အဓိက ကျောင်းဆောက်တဲ့ကုသိုလ်ထဲမှာ မိမိရဲ့ ဒါနပါဖို့သာ အရေးကြီးပါတယ်။ အဲဒီကုသိုလ်ဟာလည်း ကျန်တဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုမပြောလိုတော့ပါဘူး။ အပါယ်လေးပါးက လွတ်မြောက်ခြင်းဆိုတဲ့ အဆင့်မြင့်တဲ့ အကျိုးကိုပဲပြောချင်ပါတယ်။ အဲလို ကျောင်းတစ်ဆောင်၊ ဒါမှမဟုတ်
(သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အလားတူဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကုသိုလ်ကိုလည်း တတ်နိုင်သလောက်လှူဒါန်းပါလို့ ပြောပြ
ဆိုလိုတာက ရေတွင်းရေကန်များကိုတူးဖော်ခြင်း၊ လှူဒါန်းခြင်း၊ ရေတွင်းရေကန်အဟောင်းများကိုပြုပြင်လှူဒါန်းခြင်းဆိုတဲ့ကုသိုလ်မျိုးပါ။ အဲလောက်ထိ မလုပ်နိုင်သေးဘူးဘုရားဆိုရင် မိမိအိမ်ရှေ့မှာဖြစ်စေ၊ လမ်းထောင့်တစ်နေရာရာမှာဖြစ်စေ ရေအိုးစင်လေးဆောက်ပြီး သောက်ရေအိုးလေး တည်ထားမယ်ဆိုရင်လည်းရပါတယ်။ အဲလောက်ထိမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင် အောက်ထစ်ဆုံး
ရေသန့်ဗူးလေးကိုတည်ထားပြီး ခရီးသွား ရဟန်း၊ ရှင်၊ လူများသောက်သုံးဖို့ တည်ထားမယ်ဆိုရင်လည်း အဲဒီဒါနဟာ ငွေကြေးနဲ့တိုင်းတာမယ်ဆိုရင် သေးပေမယ့် ရလိုက်တဲ့ အကျိုးက အပါယ်လေးပါးလွတ်မြောက်တဲ့အထိ တန်ဘိုးလည်းကြီး အကျုိးလည်း များပါတယ်။ သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်များနဲ့ အလားတူဖြစ်တာပါ။
ဒါဖြင့်ရင် အားလုံးသော ဒကာ ဒကာမများ ဆိုခဲ့ ကုသိုလ်(၇)မျိုးထဲက တစ်မျိုးကိုဖြစ်စေ၊ နှစ်မျိုးကိုဖြစ်စေ၊ (၇)မျိုးလုံးကိုဖြစ်စေ အမြဲဝတ်ထားပြီး ပြုလုပ်မယ်ဆိုရင် မြတ်စွာဘုရားက သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်နှင့်
အလားတူပါတယ်၊ သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်များ အပါယ်လေးပါးက လွတ်မြောက်သလို အဲဒီကုသိုလ်များကို
အမြဲပြုလုပ်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်များလည်း အပါယ်လေးပါးက လွတ်မြောက်ပါတယ်လို့
သေသေချာချာဟောထားခဲ့တာပါ။ တစ်ကြိမ်လောက်လုပ်ပြီး အပါယ်လေးပါးက လွတ်မြောက်ချင်လို့တော့ မရဘူးနော်၊ (နိဗဒ္ဓ)ဆိုတဲ့ပါဠိက ပါနေတော့ အမြဲဝတ်ထားပြီး ပြုလုပ်ရမယ်လို့ပြောတာပါ။ ဝါဆိုသင်္ကန်းဆိုလည်း နှစ်စဉ်၊ စာရေးတံမဲဆိုရင်လည်း နှစ်စဉ်၊ ဆွမ်းချိုင့်ဆိုရင်လည်း လစဉ်၊ ရေအိုးစင်ဆိုရင်လည်းနေ့စဉ်နေ့တိုင်းပေါ့။ ရတနာသုံးပါးကိုလည်း အသက်ထက်ဆုံးကိုးကွယ်ဆည်းကပ်ရမယ်။ ငါးပါးသီလကိုလည်း အတတ်နိုင်ဆုံးစောင့်ထိန်းမယ်ဆိုရင် အပါယ်လေးပါးကလွတ်မြောက်ပါတယ်လို့ တိုက်တွန်း အသိပေးချင်တာပါ။ အားလုံးသော ဒကာ၊ ဒကာမ များ မိမိနှင့်ပတ်သတ်တဲ့ဆွေမျိုး မိတ်ဆွေ အပေါင်းသင်းများကိုလည်း ဒီကုသိုလ်(၇)ချက်ကို တစ်ဆင့်ပြောပြပေးပါလို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။ ပြီးတော့ မိမိကိုယ်တိုင်လည်း တတ်နိုင်သလောက် တစ်မျိုးကိုဖြစ်စေ၊ နှစ်မျိုးကိုဖြစ်စေ၊ (၇)မျိုးလုံးကိုဖြစ်စေ ဝတ်ထားပြီး အားထုတ်ပါလို့တိုက်တွန်း
Posted by aung myin at 9:49 PM
ကမ္ဘာ့သမိုင်းတွင် ထင်ရှားသော အသောကမင်းကြီး(ခေါ်) သီရိဓမ္မာသောက မင်းကြီးသည် ဗုဒ္ဓဘာသာကို အထူးယုံကြည်သက်ဝင်သူ ဖြစ်သည်။ အထူးကိုးကွယ် ဆည်းကပ်သူလည်း ဖြစ်သည်။ သူသည် ဗုဒ္ဓသာသနာ ထွန်းကားရေးအတွက် အမှတ်အသားအဖြစ် အိန္ဒိယပြည်၌ ကျောက်တိုင်ကြီး ၄-တိုင် စိုက်ထူထားခဲ့သည်။
၁။ နွားလားဥသဘရုပ် ကျောက်တိုင်
အသောကမင်းကြီးသည် ကောလိယတိုင်း ရွာမရွာ အနီးတွင်
ကျောက်တိုင်ကြီး တခု စိုက်ထူခဲ့သည်။ ထိုကျောက်တိုင်ထိပ်ပေါ်တွင်
နွားလားဥသဘရုပ်ကို အထွတ်တင်ထားသည်။ အဓိပ္ပါယ်မှာ "ငါသည် တိုင်းပြည်နှင့် သာသနာအတွက် နွားကဲ့သို့ သည်းခံ၍ ရုန်းကန်တော့မည်"ဆိုသော ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် စိုက်ထူခြင်းဖြစ်သည်။
၂။ သိန္ဓောမြင်းရုပ် ကျောက်တိုင်
ထို့ပြင် အသောကမင်းကြီးသည် ဗုဒ္ဓဘုရားရှင် ဖွားမြင်တော်မူရာ လုမ္ဗိနီတွင်လည်း ကျောက်တိုင် စိုက်ထူခဲ့သည်။ ထိုကျောက်တိုင်၏ ထိပ်ပေါ်တွင် သိန္ဓောမြင်းရုပ်ကို အထွတ်တင်ထားသည်။ "ငါသည် သာသနာနှင့် လူသားတို့အတွက် မြင်းကဲ့သို့ လျင်မြန် သွက်လက်စွာ ဆောင်ရွက်မည်"ဟူသော ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် မြင်းရုပ်ကို ထားရှိခြင်း ဖြစ်သည်။
၃။ ဆင်ရုပ် ကျောက်တိုင်
၄။ ခြင်္သေ့ရုပ် ကျောက်တိုင်
ထို့ပြင် အသောကမင်းကြီးသည် ဗာရာဏသီ မိဂဒါဝုန်တွင် ကျောက်တိုင်ကြီး တတိုင် စိုက်ထူထားပြန်သည်။ မိဂဒါဝုန်မှာ ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်က ပဉ္စဝဂ္ဂီငါးဦးကို ပထမဦးဆုံးသော တရားတော်ဖြစ်သည့် ဓမ္မစကြာ တရားတော်ကို ဟောတော်မူသောနေရာ ဖြစ်သည်။ ထိုကျောက်တိုင်ထိပ်တွင်ကား သီဟရာဇာ ခြင်္သေ့ရုပ် အထွတ်တင်ထားသည်။ "ငါသည် တိုင်းကျိုးပြည်ကျိုး သာသနာအကျိုး သယ်ပိုးရာ၌၄င်း၊ တိုင်းပြည်အန္တရာယ် သာသနာ့အန္တရာယ် အသွယ်သွယ်ကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရာ၌၄င်း၊ ခြင်္သေ့ကဲ့သို့ သတ္တိရှိရှိ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်မည်"ဟူသော ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ခြင်္သေ့ရုပ်ကို ထားရှိခြင်းဖြစ်သည်။
ထေရဝါဒ တို့တိုင်းပြည်၏ စာမျက်နှာမှ ကူးယူဖော်ပြပါသည်။
Posted by aung myin at 9:04 PM
၁။ ဗျာဒိတ်ခံယူသောဘ၀ - သုမေဓာရှင်ရသေ့ဘ၀
၂။ ဗျာဒိတ်ခံယူသောနေ့ - ကဆုန်လပြည့်နေ့
၃။ ဗျာဒိတ်ပေးသောဘုရား - ဒီပင်္ကရာမြတ်စွာဘုရား
၄။ ပါရမီဖြည့်ဖက် - သုမိတ္တာအမျိုးသမီး
၅။ ပါရမီဖြည့်ရာကာလ - လေးသင်္ချနှင့်ကမ္ဘာတစ်သိန်း
( သုမေဓာရသေ့ဘ၀မှ ဝေဿန္တရာဘ၀အထိ )
၆။ ဖြည့်ခဲ့သောပါရမီ - ဒါန၊ သီလစသော ပါရမီ (၁၀)ပါး
၇။ ပါရမီဖြည့်ရခြင်းရည်ရွယ်ချက် - သတ္တ၀ါများ၏ အကျိုးကိုဆောင်ရွက်ရန်
၈။ နောက်ဆုံးစံခဲ့သောနတ်ပြည် - တုတိသာနတ်ပြည်
၉။ နတ်သားအမည် - သေတကေတု မည်သောနတ်သား
၁၀။ ဘုရားဖြစ်ရန်တောင်းပန်သူများ - နတ်၊ ဗြဟ္မာများ
၁၁။ ကြည့်ခြင်းကြီး(၅)ပါး - လူ့သက်တမ်း(ကာလ)
၁၂။ မယ်တော်အိမ်မက် - နတ်မင်းများကအနောဝတတ်အိုင်သို့
သယ်ပြီး ရေချိုးပေး၊ ကျောက်ဖျာ၌အိပ်၊
၁၃။ သန္ဓေယူသောနေ့ - မဟာသက္ကရာဇ် (၆၇)
၁၄။ မိဘအမည် - သုဒ္ဓေါဓနနှင့် မာယာဒေ၀ီ
၁၅။ နေပြည်တော် - ကပိလ၀တ်ပြည် (သက္ကတိုင်း)
၁၆။ အမျိုးအနွယ် - သာကီဝင်မင်းမျိုး
၁၇။ ဖွားသောနေ့ - မဟာသက္ကရာဇ်(၆၈)၊ ကဆုန်လပြည့် သောကြာနေ့
၁၈။ ဖွားရာဌါန - လုမ္ဗနီဥယျာဉ် (ကပိလ၀တ်နှင့် ဒေ၀ဒဟအကြားရှိ)
၁၉။ ဘုရားဖြစ်မည်ဟုဧကန်ဟောသူ - ကောဏ္ဍညပုဏ္ဏား
၂၀။ မိထွေးတော် - ဂေါတမီ
၂၁။ မင်းသားအမည် - သိဒ္ဓတ္ထ
၂၂။ ဖွားဖက်တော်များ - ယသော်ဓရာ၊ အာနန္ဒာမင်းသား၊ ဆန္နအမတ်၊ ကာဠုဒါယီ၊
ကဏ္ဍကမြင်း၊ ဗောဓိပင်၊ ရွှေအိုးကြီး(၄)လုံး
၂၃။ ကြင်ယာတော် - ယသောဓရာ (ဘဒ္ဒကဉ္စနာ)
၂၄။ ရင်သွေးတော် - ရာဟုလာ
၂၅။ ယောက်ဖတော် - ဒေ၀ဒတ်
၂၆။ နန်းစံသောနှစ် - ၁၃နှစ် (၁၆ နှစ်မှ ၂၉ နှစ်ထိ)
၂၇။ မြင်သောနိမိတ် - သူအို, သူနာ, သူသေ, ရဟန်း
၂၈။ တောထွက်သောအသက် - ၂၉နှစ်
၂၉။ တောထွက်သောနေ့ - မဟာသက္ကရာဇ် ၉၇၊ ၀ါဆိုလပြည့်
၃၀။ တောထွက်ချိန်ပါသူ - ကဏ္ဍကမြင်းနှင့် ဆန္နအမတ်
၃၁။ ဖြတ်ကူးသောမြစ် - အနော်မာမြစ်
၃၂။ ပယ်သောအရာ - ဆံတော်နှင့် အ၀တ်
၃၃။ ဆံတော်တည်ရာစေတီ - တာဝတိံသာနတ်ပြည်ရှိ စူဠာမဏိစေတီတော်
၃၄။ ၀တ်တော်စေတီ - ဗြဟ္မာပြည်ရှိဒုဿစေတီ
၃၅။ သင်္ကန်းပရိက္ခရာလှူသူ - ဃဋိကာရဗြဟ္မာ
၃၆။ ဒုက္ကရစရိယကျင့်ရာဌါန - ဥရုဝေဠတော
၃၇။ ဒုက္ကရစရိယကျင့်သောနှစ် - (၆) နှစ်
၃၈။ ဘုရားဖြစ်သောနှစ် - မဟာသက္ကရာဇ်(၁၀၃)ခု၊ ကဆုန်လပြည့်
၃၉။ ဘုရားဖြစ်ချိန်အသက် - ' ၃၅ ' နှစ်
၄၀။ ဘုရားဖြစ်ချိန်လူတို့သက်တမ်း - (၁၀၀) တမ်း
၄၁။ ဒုက္ကရစရိယကျင့်ချိန်အလုပ်အကျွေး - ပဉ္စ၀ဂ္ဂီ (၅) ဦး
၄၂။ ဘုရားဘွဲ့တော် - ဂေါတမ
၄၃။ ဃနာနို့ဆွမ်းကပ်လှူသူ - သုဇာတာအမျိုးသမီး
၄၄။ ရွှေခွက်မျှောသောမြစ် - နေရဉ္ဇရာမြစ်
၄၅။ ဗောဓိပင်အသွားမြက်လှူသူ - သောတ္ထိယမြက်ရိတ်သမား
၄၆။ မြက်မှဖြစ်သောအရာ - ရွှေပလ္လင်
၄၇။ ရွှေပလ္လင်လာလုသူ - သ၀တ္တိနတ်ပြည်နေမာရ်နတ်
၄၈။ ဘုရားဘက်မှသက်သေပြုသူ - ၀သုနြေ္ဒမြေစောင့်နတ်
၄၉။ ဘုရားဦးစွာရသောဉာဏ်များ - ပထမယံ၌ ပုဗ္ဗေနိဝါသဉာဏ်၊
ပစ္ဆိမယံ၌ အာသ၀က္ခယဉာဏ်၊
၅၀။ ဓမ္မစကြာဟောသောနေရာ - မိဂဒါဝုန်တော
၅၁။ ဓမ္မစကြာဟောသောနေ့ - မဟာသက္ကရာဇ် ၁၀၃ခု၊ ၀ါဆိုလပြည့်၊ စနေနေ့
၅၂။ ပထမဦးဆုံးရဟန္တာဖြစ်သူ - အရှင်ကောဏ္ဍည
၅၃။ တရားဦးဟောသည့်နေရာ - ဗာရာဏသီပြည်၊ မိဂဒါဝုန်တော
၅၄။ ပထမဆုံးသာဝက - ပဉ္စ၀ဂ္ဂီ (၅) ဦး
၅၅။ နောက်ဆုံးကျွတ်သောသာဝက - သုဘဒ္ဒပရိဗိုဇ်
၅၆။ လက်ယာရံ အဂ္ဂသာဝက - အရှင်သာရိပုတ္တရာ
၅၇။ လက်ဝဲရံ အဂ္ဂသာဝက - အရှင်မဟာမောဂ္ဂလာန်
၅၈။ အဆုံးအမ - ပရိယတ္တိ, ပဋိပတ္တိ, ပဋိဝေဓ
၅၉။ ကျင့်စဉ်သိက္ခာ - သီလ, သမာဓိ, ပညာ
၆၀။ နောက်ဆုံးဆွမ်းလှူသူ - စုန္ဒ
၆၁။ နောက်ဆုံးကျွတ်သူ - သုဘဒ္ဒပရိဗိုဇ်
၆၂။ ပရိနိဗ္ဗါန်ပြုသောအသက် - သက်တော် (၈၀)
၆၃။ ပရိနိဗ္ဗါန်စံသောနေ့ - မဟာသက္ကရာဇ် ၁၄၈-ခု၊ ကဆုန်လပြည့်၊ အင်္ဂါနေ့။
Posted by aung myin at 5:11 AM
ဗုဒ္ဓ [ The Fully-Enlightened ]
ဗုဒ္ဓ - ဘီစီ ၆၂၃-ခုနှစ်တွင် ကပ္ပိလ၀တ္ထုမြို့တော်၌ ခမည်းတော် သုဒ္ဓေါဒနမင်း၊ မယ်တော် သီရိမဟာမာယာဒေ၀ီတို့မှဖွားမြင်တော်မူသည်။ သကျသာကီဝင်မင်းမျိုးဖြစ်သည်။
သက်တော် ၁၆-နှစ်တွင် ဒေ၀ဒဟမြို့တော်မှ ဘဒ္ဒကဉ္စနာယသောဓရာဒေ၀ီနှင့် လက်ထပ်၍
ထီးနန်းစည်းစိမ် ခံစားတော်မူသည်။ သက်တော်၂၉-နှစ်တွင် သားတော်ရာဟုလာမွေးဖွားခဲ့သည်။
ထိုနေ့မှာပင် တောထွက်တော်မူခဲ့၍ ဥရုဝေလ တောအုပ်၌ ၆-နှစ်တိုင်တိုင် ဒုက္ကရစရိယာ အကျင့်ကို
ကျင့်ခဲ့သည်။ သက်တော် ၃၅-နှစ်တွင် ဂယာမြို့အနီး ဗောဓိမဏ္ဍိုင်၌ လောကသုံးပါးတွင် အတုမရှိ မြင့်မြတ်သောသဗ္ဗညူဗုဒ္ဓအဖြစ်သို့ ရောက်တော်မူခဲ့သည်။
၄၅-၀ါ ကာလပတ်လုံး တရားတော်များကို လှည့်လည် ဟောကြားတော်မူခဲ့ပြီး သက်တော် ၈၀-အရွယ်တွင်
ဗုဒ္ဓသည် သတ္တ၀ါများ စီးပွါးချမ်းသာအကျိုးငှါ ပွင့်ပေါ်တော်မူလာခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
မြတ်ဗုဒ္ဓကို ကိုးကွယ်ရာဟူ၍ ဆည်းကပ်ပါသည်။
Buddha - The Fully-Enlightened
He has born is Kapilavatthu in 623-B.C. His parents were King Suddhodana and Queen Maha Maya of
Sakyan Clan. At the age of Sixteen, he married Bhaddakancana Yasodhara of Devadaha City and took
the royal throne. At the age of twenty-nine, he gotason and named him Rahula. On the day his son
was born, he renounced the world and wandered about in Uruvela grove, seaching for the ultimate
Truth from various teachers. For six long years he parctised the Dukkaracariya, the difficult practice
which no ordinary person can undertake. At the age of thirth-five, he attained full Enlightened at the
foot of the Bodhi Tree near the town of Gaya. He taught the dhamma for forty-five years of Buddhahood and at the age of eighty, he realized Parinibbana at Kusinara.
For the welfare of all living beings, the Buddha appeared in this world.
Posted by aung myin at 5:55 AM
ကိုယ်တော်မှဖြစ်သော ဓါတ်တော် [Bone relics]
ပုံတွင်ပါသောဓါတ်တော်သည် မော်လမြိုင်မြို့၊ လောကမှန်ကူနှင့်လောကဥသျှောင်နှီးဘုးရားစေတီတော်ကြီးတွင်
တည်ထားကိုးကွယ်ထားပြီး သီရိလင်္ကာနိုင်ငံမှလှူဒါန်းထားသော ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရား၏ဓါတ်တော်ဖြစ်ပါသည်။
သရီရဓါတု - ကိုယ်တော်မှဖြစ်သော ဓါတ်တော်
မြတ်စွာဘုရား ပရိနိဗ္ဗါန်စံရာတွင် ကိုယ်တော်မှ ကြွင်းကျန်ရစ်သော အရိုးဓါတ်တော်များကို ခေါ်သည်။ ပမာဏအားဖြင့် မုန်ညှင်းစေ့မှ ပဲနောက်စေ့တစ်ခြမ်းအထိ အရွယ်အစားအပြားပြားရှိသည်၊
ထို့ပြင်မပြိုကွဲနိုင်သော အသမ္ဘိန္န ဓါတ်တော်ကြီး ခုနစ်ဆူလည်း ရှိသေးသည်၊ ယင်းတို့မှာ သင်းကျစ်တော်၊
Sarira dhatu - Bone relics
The remains of the Buddha after his passing away and cremation.
Bone relics consist of small pieces of bones ranging in size fromamustard seed to halfakidney
bean as well as the seven larger imperishable pieces, namely, the upper forepart of the skull,
two collar bones and foyr eye-teeth.
Posted by aung myin at 5:27 AM
[The Fully-Enlightened Buddha]
" ဗုဒ္ဓံ , ဓမ္မံ , သံဃံ , ပူဇေမိ "
"[I makeadevotional offering Buddan,Dhaman,Tangan]"
[Aung Myin's blog is under shadow and kindness of our Buddish.So,everybody comes here is cool,pleasure and happiness.]
[Myanmar's standard time]
[Mingalarpar,thanks you so much who visits my blog.]
နည်းပညာနှင့် solfware (25)
ရတနာ သုံးပါး (ခ) ၉၆၉ ၏အဓိပ္ပါယ် (7)
သိင်္ဂါလောဝါဒ ခေါ် လူတို့ကျင့်ဝတ်များ (21)
နေ့ထူး နေ့မြတ် (6)
နှစ်တစ်ရာ အင်္ဂလိပ်-မြန်မာ ပြက္ခဒိန်
နှစ်တစ်ရာ အင်္ဂလိပ်-မြန်မာ ပြက္ခဒိန် Myanmar Calander လေးတင်ပေးရင်နဲ့ နှစ်တစ်ရာမြန်မာပြက္ခဒိန်လေးကို လည်းအားလုံးအတွက်အသုံးဝင်မယ်ထင်လို့...
မြန်မာနိုင်ငံအကြောင်းသိကောင်းစရာ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်ကိုယခင်က ဗမာ လို့ ကမ္ဘာမှာလူသိများကြပါသည်။ ရှေးအခါက အိန္ဒိယတိုင်းရင်းသားတ...
ပန်းဆယ်မျိုး(မြန်မာ့ရိုးရာ) ပန်း´ဟူသော ဝေါဟာရ၏ မူလဘူတ အရင်းအမြစ်မှာ `ပန်´ဖြစ်ကြောင်း စာပေပညာရှင် များက ဖေါ် ထုတ်ထားကြသည်။ `ပန်´၏ အနက်အဓိပ္ပါယ်...
ပအိုဝ်း တိုင်းရင်းသားပေါက်ဖွားလာပုံ ပအိုဝ်း တိုင်းရင်းသားတို့သည် မိမိကိုယ်ကို နဂါးအမျိုးအနွယ်မှ ပေါက်ဖွားလာသည်ဟု ယူဆကြ၏။ မိခင်မှာ နဂ...
သီတင်းကျွတ်လပြည့် အဘိဓမ္မာအခါတော်နေ့ မြတ်စွာဘုရားက တာဝတိံသာ နတ်ပြည်မှာ နိမ္မိတ ရုပ်ပွားတော် ကိုယ်စား ထားခဲ့ပြီး အဘိ ဓမ္မာ တရားတော် အကျ...
ရတနာ (၃) ပါး (the three Gems or the three objects of veneration, Buddha, Dhama and Sangha.) ရတနာမည်ပုံ_ ...
ဗုဒ္ဓဘာသာသီချင်းများ ဗုဒ္ဓဘာသာသီချင်း (၁) ဗုဒ္ဓဘာသာသီချင်း (၂) ဗုဒ္ဓဘာသာသီချင်း (၃) ဗုဒ္ဓဘာသာသီချင်း (၄)
ဗေဒင် ဗေဒင်ဝါသနာရှင်များအတွက်ပါ။ BayDin.FM.exe
ကနောင်မင်းသားကြီးလုပ်ကြံခံရပုံ သိထားသင့်တဲ့အတွက် တင်ပြပါ့မယ်( မသိသေးတဲ့သူတွေအတွက်ပါ) ကနောင်မင်းသားကြီးကို အားလုံးသိပါတယ်။ ...
Ifyouhave suggestion, youcangiveme